नारायण तिवारी – मझेरी डट कम
घरको आँगन मेरो
बाढी पसे पछि
मज्जा लाग्यो मलाई
तिमीले कोट-पाइन्ट लगाएको
पोसाकमा नखोजेको मन पर्यो
तर, बन्दुक बोकेको मन परेन
बन्दुकको धङ्धङीले अझै गाँजेको
मन परेन ।
ज्ााडोको महिना । सात बजेको छ । गर्मीको महिना हुँदो हो त सात बज्दा उज्यालै हुन्थ्यो । अहिले त सात बज्दा मध्यराति जस्तो । त्यसमाथि सुमन घरमा एक्लै छ । आमा मामा घर जानुभएको छ । बाबा अफिस । अफिसबाट घर आउन
उपहार ससुराको फैसला हजुरबाको
हाम्रो समाजमा बिहेको माग राख्ने चलन नभए पनि मागी बिहेमा केही न केही पाइहालिन्थ्यो । केही नभए पनि एकसरो लुगाफाटो र सुत्नलाई एउटा खाट र डसना सिरक कतै नजा ! तर मैले मागी कोइन ‘भागी’ बिहा गरेको थिएँ । अर्थात् ‘प्रीति’ बसेर अभिभावकको मन्जुरीबिना केटी भगाएको थिएँ । जातपात केही नमिल्ने भएर होइन धनसम्पत्ति नमिल्ने भएर । अर्थात् उनीहरू धनी थिए र म पढेलेखेको भएर पनि गरीब ।
म हुँ एक बालक पढ्ने मेरो काम
पढी गुनी ठूलो भई राख्छु देशको नाम ।
“एउटा पिउसो छ, त्यो टाइममा खाँदैन !” आमा भाइका निम्ति ज्यादै चनाखो रहने गर्नुहुन्छ – तर मेरा निम्ति …. ?
हामी केटाकेटीका नाउँमा घरमा केवल दुईजना छौँ – भाइ र म । भाइ १० वर्षको छ र म बाह्र वर्षकी ।
मधेसले मलाई गाली गर्छ
जसले सधैँ अँगालोमा राख्यो
उसलाई किन गाली
जसले गर्छ तिमीलाई गाली
उसलाई पो गर्नुपर्ने हो
मैले उसको पसलमा प्रवेश गर्दा उसले मुण्टो उठाएर हर्ेदा पनि हेरेन । उसको आ“खाले मलाई देखिसकेको थियो । किनभने मेरो आ“खा निमेषभर उसको आ“खासित जुधेका थिए । मैले साविकझै“ मुस्कान फाले“ । उसले नचाहेर ओठ खुकुलो पार्‍यो । तर, साविकझै“ मुस्कान फालेन । पहिलेपहिले ऊ दर्ुइ हात जोडेर ‘नमस्कार’ को लेघ्रो तान्थ्यो, “भन्नुहोस् हजुर केके सेवा गरौ“ …†” लाग्थ्यो, साहूनी मृदुभाषी छ, कोमल छ र छ मानवीय व्यवहारयुक्त …† तर, अहिले उसको मुखबाट बोली फुटेन । मैले नै पहल गर्दै अभिवादनस्वरूप एक हात उठाए“ । उसले मरेर एक हात ‘हाफ्’ उठायो ।
दिनभरि स्कुल अनि एकछिन खेल्छु साँझमा
पढ्न बस्छु बिहान-राति आमा बाका माझमा ।
जिन्दगीमा पहिलोपल्ट उसलाई आफ्नो शिर ठाडो भएर उठेको महसुस भएको छ । जतिपटक ब्यारेकअगाडिबाट बाटो काट्थ्यो, त्यतिपटक उसको शिर निहुरन्िथ्यो । ‘श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको जय जय जय, श्री ५ बडामहारानी सरकारको जय जय जय ‘ जतिपटक ऊ पढ्थ्यो, त्यतिपटक उसलाई घृणाले थुक्न मन लाग्थ्यो र बसको बाहिरबाट मुन्टो निकालेर पिच्च थुकिदिन्थ्यो । फेर िडर पनि लाग्दथ्यो, कसैले देखिहाले भने – अर्थात्, त्यहा“ पहरामा बस्ने सेनाको जवानले देखिहाल्यो भने…- उसको शरीरका छाला काडिन सक्थे । ‘तै“ले कसलाई थुकेको – राष्ट्रियताप्रति यस्तो अपमान – राष्ट्रिय एकताको प्रतीक सरकारप्रति यस्तो घृणा – ठोक यसलाई…†’ यसो भनिन र त्यसो गरनि सकिन्थ्यो ।
एक दिन होइन
दर्ुइ दिन होइन
तीन दिन होइन
खाने बेलामा पनि सधैँ
अरूलाई होस् कि नहोस्
आफूलाई घिउ खोज्नुहुन्छ !